नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ७१ जना सवार विमानबाट १७ जनालाई जीवितै उद्धार, काठमाडौं विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको विमानमा ३३ जना नेपाली यात्रु, ३७ पुरुष, २८ महिला र २ जना बच्चा !
७१ जना सवार विमानबाट १७ जनालाई जीवितै उद्धार, काठमाडौं विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको विमानमा ३३ जना नेपाली यात्रु, ३७ पुरुष, २८ महिला र २ जना बच्चा !
युएस बंगलाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको छ । बंगलादेशको ढाकाबाट आएको विमानमा अवतरणको क्रममा दुर्घटना भएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको बंगलादेशी विमानमा ३३ जना नेपाली यात्रु रहेको पाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले दुर्घटनामा परेको विमानमा ३३ जना नेपाली यात्रु रहेको जानकारी गराएको छ । ७१ जना सवार विमानबाट १७ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । उद्धार हुनेमा केही नेपाली पनि छन् । विभिन्न ट्राभल्स एजेन्सीमा काम गर्ने १६ जना नेपाली पनि दुर्घटनामा परेका छन् । उनीहरु तालिमका लागि बंगलादेश गएर फर्कदै थिए । विमानमा ३७ पुरुष, २८ महिला र २ जना बच्चा रहेका थिए । विमानमा रहेका नेपालीहरुको नाम सार्वजनिक